Xarumaha Daljir Boosaaso Garoowe iyo Galkacyo oo maalintii 11aad sharci darro ugu xiran Puntland. – Radio Daljir
Xarumaha Daljir Boosaaso Garoowe iyo Galkacyo oo maalintii 11aad sharci darro ugu xiran Puntland.
Luulyo 3, 2016 1:02 b 0
July 3 2016_Xarumaha Radio Daljir ee magaalooyinka Boosaaso, Garoowe iyo Galkacyo ayaa wali hawada ka maqan kadib markii dowladda Puntland ku xidhay sifo aan sharci ahayn.
Xariga Daljir oo galay maalinkii 11aad ayaa ah mid dowladdu ay wali ka aamusan tahay xilli ay isa soo tarayso cabashada shacabka Soomaaliyeed ee ku taxnaa barnaamijyada iyo wararka ka baxa Daljir.
Maamulka guud ee Daljir iyo ururka suxufiyiinta Puntland ee MAP ayaa sheegay in idaacaddu qareen qabsan doonto ayna maxkamad la fuuli doonto cidii ka dambaysay xariga sharci darrada ah.
DHEGEYSO-Shacabka Kunool gobolada Soomaaliya oo Puntland ugu baaqay inay siidayso Daljir.
DHEGEYSO-Gudiga doorashada Soomaaliya oo sheegay in shaqadoodu aysan cayinayn.